Qalabka Jarida Qalabka Dingzhou Gemlight Co., Ltd., waxaa la aasaasay 1990, waa warshad casri ah oo soo saarta qalabka gacanta qalabka beeraha, warshad fadhigeedu yahay magaalada Dingzhou, taas oo ku taal bartamaha Gobolka Hebei, qalbiga biraha adduunka. Gemlight wuxuu ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista qalabka iyo fiilooyinka siligga.
In ka badan 30 sano oo waayo aragnimo ah qalabka beerta, qalabka beeraha iyo mesh silig. In ka badan 26 sano oo khibrad u leh qalabka gacanta ee jardiinada, beerta iyo mesh silig, Qalabka Jarida Gemlight wuxuu soo saaray khad soosaar casri ah oo daboolaya shaabbadda, daaweynta kuleylka, rinjiyeynta iyo isku uruurinta hal saqaf hoostiisa. Waxaan xakameyn karnaa aalad kasta tayada ay leedahay bilowgeeda. Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin SGS iyo oggolaanshaha intertek ee hubintaada. ISO9001: 2015 waa la dhaafay.
4 Milyan oo Qalab ah iyo mesh silig ayaa la soo saaraa Sannadle waxaana laga iibiyaa adduunka oo idil.
Warshaddeena 32000sqm, oo leh aaladda elektaroonigga ah ee xakamaynta kuleylka kuleylka, iyo mashiinka feerka ee Pneumatic, Gemlight wuxuu dammaanad qaadayaa qalab kasta iyo tayada silig-mesh, sidoo kale awoodda wax soo saar ee 4 milyan oo qalab ah. Waxaad ka heli kartaa qalabkeena gudaha USA, Mexico, Kenya, Uganda iyo Nigeria, Slovenia, Poland iwm. Isla mar ahaantaana, adeegyada ODM iyo OEM ayaa la bixiyaa si loo daboolo codsigaaga iyo qanacsanaantaada.
Suuqyada dibedda, Gemlight waxay ka abuuri doontaa shabakad adeeg suuq-geyn bisil in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.
Gemlight wuxuu noqday dhoofiyaha ugu weyn ee Machete iyo aaladaha kale ee lagu beerto beeraha ee Shiinaha.
"Baangadu aad ayey u fiican tahay. Mr. John waa mid aad u fiican. Waan ku faraxsanahay la shaqeynta isaga. Aad ayuu u caawiyaa oo waa deganayahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhawaan dalbado konteenarro cusub oo tayada ay aad u wanaagsan tahay. Waxaan rajeynayaa inaan arko xiriir badan mustaqbalka."
"Michelle, waxaan hayaa quudin cusub oo ku saabsan Machetes. Hada waxaad heysataa koox aad uga fiican. John iyo Amanda waa dad aad u xirfad iyo karti badan. Way fahmeen codsiga waxayna ka jawaabeen waqti iyo si qadarin leh. Hambalyo! Dabcan sidoo kale waxaad tahay qof xirfad badan oo fahmaya wax soo saarkaaga iyo suuqgeyn badan. "
"Caa'isha, sida had iyo jeer adeeggaaga macmiil aad u fiican yahay. Raggiina si weyn baad u soo dhaweyseen oo haddii aan waligeen u baahanahay inaan kala soo baxno waxaad noo noqonaysa wicitaankeenna ugu horreeya.
Tayada lagu kalsoonaan karo, Qiimaha ugufiican, iyo gaarsiinta degdega ah!